Fiparitahan’ny laza adina :: Mpampianatra iray mpampanao “cours” naiditra am-ponja • AoRaha
Fiparitahan’ny laza adina Mpampianatra iray mpampanao “cours” naiditra am-ponja
Vita omaly ny fanolorana ny Fitsarana ireo olona miisa folo voampanga tamin’ny fanaparitahana ny laza adina Bakalôrea farany teo. Naiditra am-ponja ny mpampianatra iray, mpampanao fanampim-pianarana na“cours” eny Analakely, tamin’ireo olona voasambotra sy voatazona teny amin’ny tobin’ny Zandarimaria, eny Betongolo.
Ny sivy ambiny kosa, ka isan’izany ny talen’ny Ofisin’ny Bakalôrea eto Antananarivo sady talen’ny fanadinana ao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony teo aloha, Rakotonasy Solonjaka, dia voarara tsy mahazo mivoaka
ivelan’Antananarivo ary mandalo fanaraha-maso, isan-kerinandro eny anovin’ny zandarimaria, mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo.
fitoriana tamin’ity tranga fanaparitahana laza adina bakalôrea sy ny fanakorontanana ny fanadinana ity ny minisiteran’ny Fampianarana ambony. Fanohintohinana ny filaminana anatiny, famoahana tsiambaratelo, fandavana baiko sy fanakorontanana ny filaminam-bahoaka, ireo no vesatra niampangana ireo olona miisa folo.
Tsy mbola mifarana ny famotorana momba ity raharaha ity. Nanome baiko ny hanohizana ny famotorana ny Fitsa­rana. Noho ny fahataperan’ny 48 ora voatondron’ny lalana ahafahana mitazona olona voampanga ao amin’ny trano mihiboka no voalaza fa tsy maintsy nanolorana azy ireo ny Fitsarana, omaly, araka ny loharanom-baovao. Andrasana ny tohin’ny raharaha.
Fanendahana sy tsindron’antsy